एमाले सांसद पाण्डे र भट्टलाई नेकपा एसमा जान पाउने कि नपाउने ? सर्वोच्चले के आदेश दियो ?
यो पनि – सांसद गंगा चौधरीको जीवनलिला : श्रीमानलाई पिए बनाएर ‘सौता’लाई दा’स बनाएको खुलाशा ! काठमान्डौ– भनिन्छ,‘राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत जीवन हुँदैन’ । राजनेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भनेका सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन् । उनीहरुको जीवनमाथि जनताको नि’गरानी हुनुपर्छ ।
यो समाचार ह’टाइदिनुस्।’ सांसद चौधरीले समाचार ह’टाइदिन आग्रह गरेपनि सञ्चारकर्मीले प्रेस काउन्सिल आ’चार सं’हिता अनुसार कुनै पनि समाचार ह’टाउन नमिल्ने बताएपछि उनले फोन का’टिन्।